Xisbiga Xuriyadda oo daaha ka rogay dhibaatooyinka shaqaalaha Dowladda | Moment Union Somali Diaspora
Posted on May 1, 2016 by momentunion
Ku: dhammaan Saxaafadda gudaha iyo dibadda
Ujeeddo: Warsaxaafadeed Xisbiga Xuriyadda (The People of Freedom), dabaal degga maalinta Shaqaalaha Caalamiga darteed wuxuu hambalyo u dirayaa Shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan–Hambalyo- waxaana Xisbiga Xuriyadda uu u rajeynayaa horumar iyo mustaqbal fiican.
The People of Freedom wuxuu aad uga xun yahay duruufaha ay munaasabaddani kusoo beegantay oo ah duruufo adag iyadoo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda aanay qaadan mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen muddo dhowr bilood maamul xumida dalka ka jirta awgeed iyo ku takrifal lagu sameynayo dhaqaalaha dalka taasoo ay ka dambeyso dano shaqsiyaad gaar ah.
Sidaa darteed Xisbiga Xuriyadda wuxuu ugu baaqayaa madaxda sare ee dowladda iyo cid kasto oo ay masuuliyad ka saran tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha soomaaliyeed inay wanaajiyaan niyadda qofka shaqaalaha ah islamarkaana bixiyaan wax alla wixii xuquuq ah ee uu shaqaaluhu mutaystay. Munaasabadan darteed waa in loo istaago badbaadinta dhalinyarada soomaaliyeed ee iyaga oo nolol raadis ah badaha ku dhamaanaya loona sameeyo shaqo abuur si looga hortago dhibaatooyinka mar walba lasoo darsa xooggii uu dalkan ku tiirsanaa.
Waxaa Xisbiga Xuriyadda uu soo jeedinayaa in la saxo khaladaadka ka jira siyaabaha loo qoro shaqaalaha dowladda oo aan waafaqsaneyn hannaanka shaqo qorista caalamka, iyadoo lagu qoro Shaqaalaha dowladda hab musuq maasuq ah oo la xiriirto nin jeclaysi iyo kooxeysi taasoo ah arrin niyad jab ku beereysaysa Shaqaalaha soomaaliyeed islamarkaana iska horkeeneysa umadda soomaaliyeed ee duruufaha adag ee colaadaha iyo abaaruhu ay saameeyeen.
Hay’adaha caalamiga ee dalka ka howlgala waxaan usoo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan hannaanka shaqo qorista caalamiga oo ay iska daayaan inay shaqaaleeyaan dad ajanabi ah inta uu jiro qof soomaaliyeed oo qaban kara shaqada ay bixinayaan, waana inay xoogga saaraan shaqo siinta dadka soomaaliyeed ee gudaha wadanka ku nool si faqriga iyo shaqo la’aanta wax looga qabto.
Ugu dambeyn Xisbiga Xuriyadda wuxuu umadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dalkooda maalgashadaan lana hormariyo waxsoosaarka dalka si shaqo abuur badan loo helo loogana baxo gaajada iyo faqriga haysta in badan oo ka mid ah dadka soomaaliyeed. Guul waxaynu ku gaari karnaa inaga oo muruqeena maalno.